Laga soo bilaabo La-shaqaalaynta illaa Qeexitaanka Sirdoonka Sare ee Sirdoonka | Martech Zone
Arbacada, February 3, 2016 Talaado, Febraayo 2, 2016 Pini Yakuel
Dadka qaba sare Sirdoonka dareenka (EQ) sifiican ayaa loo jecelyahay, muujiya waxqabad xoogan guud ahaanna waa ka guuleystaan. Way adag yihiin waxayna leeyihiin xirfado bulsheed oo wanaagsan: waxay muujiyaan ka warqabka dareenka dadka kale waxayna muujiyaan baraaruggan hadalladooda iyo ficilladooda. Waxay ka heli karaan is afgarad dad badan oo kala duwan waxayna kobcin karaan cilaaqaadyo ka baxsan saaxiibtinnimo iyo karti ay ku wada noolaadaan.
Waxay tan ku gaadhaan iyaga oo fiirsada oo falanqeeya waxyaalaha qarsoon: tilmaamaha, dhawaaqa codka, ereyga xulashada, muujinta wajiga - xeerarka la sheegay iyo kuwa la dhex dhexaadinayo ee u dhexeeya dadka - iyo habdhaqankooda u waafajiya. Xeerbeegtidu wali waxay kujirtaa habka tirakoobka ee EQ, laakiin runtii uma baahnin imtixaan: waxaan u aqoonsan nahay dadka leh EQ sare inay yihiin dhageystayaasha wanaagsan, kuwa nagu kobciya dareenka aan fahamsanahay, iyo kuwa ka falcelinaya noo muuqan.
Daraasaddiisa EQ, cilmi nafsiga Daniel Kahneman ee caanka Nobel Prize caan helay in dadku door bidaan inay la ganacsadaan qof ay jecel yihiin oo ay aaminaan halkii ay ka ahaan lahaayeen qof aysan aqoon, xitaa haddii qofkaasi uu ku bixinayo wax soo saar wanaagsan qiimo jaban.
Bal ka fikir haddii noocyadu sidaas samayn karaan!
Dadka Ka Dambeeya Xogta
Ujeedada suuq geyntu waa in la ogaado oo la fahmo macmiilka si fiican in badeecada ama adeeggu ay isaga ku habboon tahay oo ay is iibiso. Maamulaha maamulka Peter Drucker (dib 1974!)
Mabda 'udub dhexaad u ah suuqgeynta ayaa ah in macaamiil si fiican aad u ogaato waxay kaa caawineysaa inaad siiso alaab iyo adeegyo ay dhab ahaan doonayaan. Fahmitaanka macnaha macmiilku had iyo jeer waa qayb ka mid ah taas, laakiin dhowaan xaddiga macluumaadka macnaha guud ee ay heli karaan suuqleyda ayaa cirka isku shareeray.
Shakhsiyeynta shakhsi ahaaneed waa tallaabada ugu horreysa - waxaan ognahay taas maxaa yeelay emayllada otomaatiga ah ayaa hadda isticmaalaya magacayaga ugu badan inta ka badan waalidkeenna. Awoodda loogu yeero macaamiisha magac ahaan iyo soo bandhigida dharka cimilada ku habboon, tusaale ahaan, waa bilow wanaagsan oo xiriir lala sameeyo.
Laakiin haddii aad awood u laheyd inaad ku eegto sawirka dhammaan macaamiishaada shaashadda TV-ga, shaqsiyeynta waxay soo gudbineysaa sawir aad u xun, sawir qeexan oo hooseeya, oo loo siman yahay sagaal ama laba iyo toban pixels. Waxaad beegsan lahayd pixel-ka cagaaran si ka duwan kan jaallaha ah, laakiin taasi waxay ku saabsan tahay xaddiga kala duwanaanshaha aad ku saleyn karto ka-qaybgalka macaamiishaada.
Haddii aad wali ku daawaneysid macaamiishaada qaabkaas pixelated, waxaad ka maqantahay mowjadda xigta ee kacaanka macaamiisha, awoodsiinta noocyada inay dhab ahaan u nuglaadaan macaamiishooda oo ay soo bandhigaan caqli shucuur iyo shaqsiyan sida ay ula xiriiraan.
Furaha lagu gaarayo qeexitaan sare ayaa kujira xogta. Macluumaadkaaga macmiilku waa mid u dhigma tiknoolajiyada dhaqdhaqaaqyada, dhawaaqa, nuxurka iyo tibaaxaha ay shucuurta aadanaha caqliga lihi dareemaan. Macaamiishaada isku xirnaantooda, rabitaankooda, baahidooda iyo ka warwareegooda dhammaantood waxay ku xardhan yihiin xogta. Laakiin si aad u abuurto isgaarsiinta caqliga leh ee macaamiishaada, waxaad u baahan tahay tikniyoolajiyadda u turjumi doonta xogtaas qaababka habdhaqanka.
Kordhi Hantidaada ugu Weyn
Tikniyoolajiyadaha suuqgeynta macaamiisha jar-jar waxay awood u leeyihiin inay soo bandhigaan sawirro sii kordhaya oo qeexan oo macaamiishaada ah. Sida algorithms iyo xogta Analytics noqda mid aad u horumarsan, pixels-yadaas shaashadaada TV-ga ah ayaa si isdaba-joog ah u yaraanaya. Si lama filaan ah ayaad u aragtaa in pixel-ka buluugga ahi aanu dhab ahaan buluug ahayn - waa afar pixels: cagaar, cawl, bunni iyo buluug khafiif ah.
Hadda waxaad bartilmaameedsan kartaa kooxaha macaamiisha ee sii kordhaya, mid kasta oo leh farriin, nuxur ama dalab u dhigma dookhooda, booska safarka macaamiisha, taabashada iyo xaaladda maskaxda. Iyo sida tikniyoolajiyaddu u sii socoto aruurinta iyo baaritaanka xogta, sawirka macaamiishaada ayaa ugu dambeyn lagu soo bandhigay sharaftiisa si heer sare ah loo qeexay.
Tani waa isgaarsiin shucuur caqli gal ah oo siinaysa ganacsiyada guuleysta faraqa ka dhanka ah tartanka adoo kasbanaya quluubta macaamiisha isla markaana ka caawinaya inay kobciyaan hantida ugu weyn ee ay leeyihiin - saldhigooda macaamiisha.
Tags: Sirdoonka dareenkashakhsi ahaaneedbartilmaameedka
Pini Yakuel, aasaasaha iyo agaasimaha guud ee Optimove, ganacsi faa'iido leh oo si dhakhso leh u kobcaya, wuxuu leeyahay in ka badan toban sano oo waayo-aragnimo ah suuq-geynta macaamiisha falanqaynta ku saleysan, la-tashiga ganacsiga iyo iibka. Jacaylkiisa fahamka waxa ku kallifa dhaqanka macaamiisha ayaa u horseeday inuu hormood ka noqdo horumarinta Optimove, oo ah hoggaanka suuqgeynta Macaamiisha Suuqgeynta ee warshadaha, awood u siinta suuqleyda si ay u kordhiyaan qiimaha macaamiishooda. Optimove waxaa isticmaala 180+ meheradood, oo ay ku jiraan Zynga, Caesars Interactive, Lucky Vitamin, iyo Outbrain.